भारतीय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भनिएको बलात्कार गरि मारिएकी ज्योति सिंहको सत्य घटना डकुमेन्ट्री-India's Daughter-BBC Video ~ Khabardari.com
भारतीय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भनिएको बलात्कार गरि मारिएकी ज्योति सिंहको सत्य घटना डकुमेन्ट्री-India's Daughter-BBC Video
11:50 PM admin No comments
सन् २०१२, December, 16 मा दिल्लीमा एक महिलाको सामुहिक बलात्कार गरी हत्या गरिएको बिसयलाइ लिएर बेलायती चलचित्र निर्मात्री लेसले उद्विन बनाएको भारत कि छोरि India's Daughter नामको डकुमेन्ट्री भारतको अदालतले यस्तो घटनाको ब्यापारिक प्रयोजनका निम्ति प्रसारण नगर्न भनि रोक लगाएको थियो ।
हेरौ उक्त बिबादित डकुमेन्ट्री - BBC has broadcast the controversial banned documentary India's Daughter on the occasions International Women s day.
सन् २०१२ को डिसेम्बर १६ का दिन नयाँदिल्लीमा एक २३ वर्षीया छात्रासँग सामूहिक बलात्कार भएको थियो । यसैका कारण उनको ज्यान गएको थियो । बीबीसीले गत बुधबार प्रसारण गरेको उक्त वृत्तचित्र भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । बलात्कारमा संलग्न एक अपराधीको अन्तर्वार्तासमेत सामेल रहेको वृत्तचित्र भारतको एक अदालतद्वारा आदेश जारी गरी प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । यो मुद्दा अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले उक्त वृतचित्रले फैसलालाई प्रभावित पार्ने अदालतको तर्क छ ।
पीडितका पिताले यसले समाजका एक वर्गको छोरीचेलीप्रतिको धारणा सबैले थाहा पाउने भन्दै वृत्तचित्रलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । 'प्रत्येकले अवश्य उक्त चलचित्र हेर्नुपर्छ,' भारतीय समाचार च्यानल एनडीटीभीले पीडितका बाबुको भनाइलाई उद्धृत गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा जनाएको छ ।
त्यसैगरी पीडितका आमाले पनि एनडीटीभीलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिनमा बीबीसीद्वारा प्रसारण गरिने भनिएको वृत्तचित्र प्रसारणमा आफ्नो कुनै प्रतिवाद नभएको जनाएकी छन् । सरकारले लगाएको प्रतिबन्धप्रति आफूलाई कुनै सरोकार नभएको यसको प्रसारणलाई कोही पनि डराउनु नपर्ने उनले बताएकी छन् । विभिन्न पुरस्कार विजेता बेलायती चलचित्र निर्माता लेस्ली उडविनद्वारा निर्मित वृत्तचित्रले भारतभरि विवाद खडा गरेको छ ।
पीडितकी आमाले बलात्कारीलाई सजाय दिएर विवादको मूल जरोलाई समाप्त पार्नुमा यस विषयमा अनाहकको राजनीति भइरहेको बताएकी छन् । 'केही दिनदेखि संसद्देखि मिडियासम्म बहस भइरहेको छ, समाधान के निस्क्यो त ? के मेरी छोरीको अपराधीलाई सजाय भयो त ?,' उनले प्रतिप्रश्न गरेकी छन् । वृत्तचित्रले भारतको छवि बिगार्ने सरकारको दाबी छ ।
त्यसमा अभियुक्त मुकेश सिंहले आफ्नो अपराधलाई सही ठहराउँदै रातिराति सडकमा हिँड्नेलाई दोषी ठहराएका छन् ।
बीबीसीमा प्रसारित 'इन्डियाज डटर (भारतकी छोरी)' शीर्षकको उक्त वृत्तचित्रलाई युट्युबले हटाएको छ । 'युट्युबजस्तो सेवाले नागरिकलाई आफ्नो कुरा राख्न र विभिन्न मतको साझेदारीमा सहयोग गर्छ, तर गैरकानुनी र हाम्रो कम्युनिटी दिशा निर्देशको उल्लंघन गर्ने सामग्रीलाई हामी हटाउँछौं,' युट्युबको प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनेको छ । बीबीसीले आफ्नो बचाउ गरेको छ । 'हाम्रो सम्पादकीय दिशानिर्देशअनुरूप वृत्तचित्र छ, यसले उक्त मुद्दालाई पूरा संवेदनशील भएर प्रस्तुत गरेको छ,' उसले भनेको छ ।
आमनगारिकको रुचिलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण समयभन्दा अगाडि उक्त वृत्तचित्रको प्रसारण गरिएको उसले जनाएको छ । भारत सरकारले बीबीसीको प्रबन्ध निर्देशकलाई पत्र लेखेर त्यसको प्रसारण रोक्न अनुरोध गरेको थियो । 'वृत्तचित्र पीडित परिवारको पूर्ण सहयोग र समर्थनले बनाइएको हो, यसले उक्त जघन्य अपराधलाई गहिरिएर बुझ्न मद्दत गर्छ,' उक्त समाचार संस्थाद्वारा जारी बयानमा भनिएको छ ।
भारतका केन्द्रीय गृहराज्य मन्त्री राजनाथ सिंहले कुन परिस्थितिमा र कसरी वृत्तचित्र छायांकनको अनुमति दिइएको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको अनुमति लिइए पनि सर्तहरूको पालना नभएको सिंहले दाबी गरेका छन् । उक्त वृत्तचित्रलाई बीबीसीले नभएर स्वतन्त्र निर्माता निर्देशक उडविनले बनाएकी छन् । भारत सरकारलाई दिग्भ्रमित गरिएको र गलत सल्ला दिएर प्रतिबन्ध गर्न उक्साएको उनले बताएकी छन् । यसलाई बीबीसी र एनडीटीभी लगायत थुप्रै च्यानलमा प्रसारण गरिने तय थियो ।
Posted in: Documentary,information,women